Iinkampani zeShell zikaRhulumente ziyathengiswa-Sele zilungele ukuSebenzisa
Iinkampani zeShell zikaRhulumente ziyathengiswa
Eyona ndlela ikhawulezayo nelula kuyo thatha inkampani yakho esidlangalaleni Kukuthenga Inkampani yeqokobhe loluntu. Inkampani yeqokobhe loluntu yinto esele ibandakanyiwe ebhalisiweyo kunye ne-SEC yokuthengisa izabelo zayo eluntwini. Sinenye yezona zinto zinkulu zeenkampani eziselifeni ezithengiswayo. Unokuba nenkampani yakho yeqokobhe kawonke-wonke okanye indibaniselwano yobudala ngeminyaka nje yeeyure ze-24.
Emva kokuba uthenge enye yeenkampani zethu zeqokobhe loluntu, amaxwebhu okudibanisa ayenziwa kwaye afayilishwa. Xa udibanisa inkampani yabucala nenkampani kawonkewonke, ugcina igama lishishini elisindayo. Amaxwebhu akho okudibanisa ziifom zomthetho zokudibanisa iinkampani zakho ezimbini, zikushiya nequmrhu elisemthethweni elilungele ukuthengisa izabelo zalo eluntwini. Umxholo apha wenzelwe ulwazi kunye nemfundo kuphela. Ezinye zeenkampani ezidweliswe apha ngezantsi azinako (okwangoku) ukuthengiswa esidlangalaleni. Eli phepha alifanelanga kuthathwa njengelesithembiso sokuthenga okanye ukuthengisa ukhuseleko. Iitransekshini ezithathwa kuphela ngamagqwetha anelayisensi kunye nabarhwebi, njengoko kufunwa ngumthetho, hayi ngokuthe ngqo kwinkampani yethu. Funa ingcebiso enelayisensi yomthetho kunye nerhafu.
Amashishini akhulileyo eNevada
I-Ald Shelf Company Corporation kunye neArhente yokuNcitshiswa
Imirhumo yokuhlaziya iNkampani yeShelf ekhulileyo
I-FAQ yeQonga leNkxaso mali yeQela
Iiphakheji zenguqu yeNkampani
Amashishini amashalofu akhulileyo eCalifornia
Uqeqesho lweshishini loluntu oludala
Amashishini esherifu akhulileyo kunye netyala leCorporate
Inkampani yeShelf kunye neNkxaso-mali yeNkampani yeZakudala
Ulwazi lwenkampani yeSalf
Sebenzisa iiNkampani zeShelfishi ezalupheleyo ngeNkqubo yokuNcedisa kwiNkxaso mali kunye neZindlu